के बालबालिकालाई कोरोना खोप आवश्यक छ? « AayoMail
के बालबालिकालाई कोरोना खोप आवश्यक छ?
2021,7 September, 7:43 am
लामो समयसम्मको निशेषधाज्ञापछि देशभर संक्रमणको अवस्था हेरेर विद्यालयहरू खोल्न अनुमति दिइएको छ। कतिपय ठाउँहरूमा त विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन्।
तर अब बालबालिकाहरूलाई पनि भ्याक्सिन लगाएर विद्यालय खोल्ने कि नलगारै विद्यालय खोल्ने भन्ने विषयमा बहस हुन थालेको छ। अर्कोथरि बच्चाहरूलाई भ्याक्सिन आवश्यक छ कि छैन भन्ने बहस पनि हुन थालेको छ।
यो बहस नेपालमात्रै होइन भारत, बेलायतलगायतका देशहरूमा पनि चर्किएको छ। नेपालमा पनि १२-१८ वर्षका बालबालिकाका लागि अमेरिकी कम्पनी मोडेर्नाको खोप लगाउने तयारी गरिएको छ। आगामी साता बालबालिकाहरूका लागि त्यो खोप नेपाल आइपुग्ने बताइएको छ।
बेलायतमा खोप सम्बन्धि एउटा सल्लाहकार समितिले १२-१५ वर्षका बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको स्वास्थ्यको आधारमा खोप दिने कुरामा असहमति जनाएका छन्।
उता ज्वाइन्ट कमिटी अन भ्याक्सिनेशन एन्ड इम्यूनाइजेशनले भनेको छ कि बालबालिकाहरूलाई भाइरस संक्रमणको खतरा निकै कम छ त्यसैले भ्याक्सिनको फाइदा पनि निकै कम नै हुनेछ।
चिकित्सकहरूले मुटु, फोक्सो अनि मिर्गौलासम्बन्धि बिरामी बालबालिकालाई खोप दिनका लागि सल्लाह दिएका छन्। किनकि स्वस्थ बालबालिकाहरूको तुलनामा उनीहरूमा कोरोनाको खतरा बढी हुन्छ।
भारतमा पनि बालबालिकालाई खोप दिने कि नदिने भन्नेबारेमा चिकित्सकहरूकै राय बाझिदै आएको छ।
भारतमा आगामी अक्टोबर महिनादेखि १२-१५ वर्षका बालबालिकाहरूलाई खोप दिन थालिएको छ।
नेशनल टेक्निकल एडभाइजरी ग्रुप अन इम्यूनाइजेशन इन इन्डिया(एनटिएजिआई)का प्रमुख डाक्टर एन के अरोडाका अनुसार सुरूमा त्यो खोप त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई दिइनेछ जसमा नसर्ने तर दीर्घ र गम्भिर रोग छ। जस्तो कि, मुटु, फोक्सो अनि मिर्गौलाका रोगी बालबालिकाहरू।
भारतले आगामी डिसेम्बर महिनासम्ममा उमेर पुगेका सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसपछि मात्रै त्यहाँका अरू स्वस्थ बालबालिकाहरूलाई खोप दिइनेछ।
भारतमा जेयडस केडिलाको भ्याक्सिनलाई बालबालिकाका लागि प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ। यो सुइरहित भ्याक्सिन हो। चिकित्सकहरूका अनुसार बालबालिकालाई दुखाइ कम होस् भनेर यस्तो भ्याक्सिन बनाइएको हो। अहिलेसम्म बालबालिकामाथि भ्याक्सिन परिक्षणको नतिजा भने आइसकेका छैनन्।
बरिष्ठ चिकित्सक डा. सुनिला गर्गले सबै बालबालिकाहरूलाई खोप आवश्यक नभएको बताउँछिन्। इन्डियन एशोशिएशन अफ प्रिभेन्टिव एन्ड सोस मेडिसिन(आइएपिएसएम)का अध्यक्षसमेत रहेकी उनले बेलायतकै डाक्टरहरुको रायसँग सहमति जनाएकी छिन्।
उनका अनुसार स्वस्थ बालबालिकाहरूलाई भ्याक्सिन दिन आवश्यक छैन।
तर डा. एन के अरोडा भने स्वस्थ बालबालिकाहरूलाई पनि भ्याक्सिन दिन आवश्यक ठान्छन् किनकि उनीहरू पनि संक्रमण फैलिनुमा कारक हुनसक्छन्।
म्याक्स अस्पतालका बालबालिका विभाग प्रमुख डा. श्याम कुकरेजा पनि सबै बालबालिकालाई खोप आवश्यक नभएको तर्क गर्छद्द् उनका अनुसार १२ भन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरूमा अहिले नै खोप आवश्यक छैन किनकि उनीहरूमा इम्युनिटी पावर बढी नै हुन्छ। तर त्यो भन्दा माथिल्लो उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई भने खोप लगाउँदा हुन्छ।
खासगरी बेलायतमा फाइज तथा मोडेर्नाका भ्याक्सिन लगाउँदा बालबालिकाहरूमा शरीर सुन्निने टाउको दुख्ने तथा मुटुको धड्कन बढ्नेजस्ता समस्याहरू देखा परेका थिए। त्यसैले त्यहाँका चिकित्सकहरूले स्वस्थ बालबालिकाहरूलाई खोप दिन आवश्यक नभएको बताएका हुन्।
अमेरिकाबाट प्राप्त एउटा आंकडाअनुसार १२-१७ वर्ष उमेर समूहका दोस्रो डोज खोप लगाइसकेका बालिबालिकाहरूमा मुटुसम्बन्धि समस्या देखिएको थियो। तर यो प्रति दशलखामा ६० जनामा देखिएको थियो। अमेरिकामा यो उमेर समूहका करोडौं बालबालिकाले भ्याक्सिन लगाइसकेका छन्। बिबिसीकाे सहयाेगमा